Global Voices teny Malagasy » Blaogy Sy Mafalda: Ny Tantaran’ny Takela-pahatsiarovana Iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Aogositra 2017 12:23 GMT 1	 · Mpanoratra Jorge Gobbi Nandika miora
Ny 30 Oktobra 2005, namoaka lahatsoratra iray [ES]  misy sarina varavarana fidirana amin'ilay tranobe Quino manakaiky ny tranon'i Mafalda , ao Chile 371, ao San Telmo, Buenos Aires, i Dario Gallo, tonian-dahatsoratry ny gazety boky Noticias. Nanoratra i Gallo fa:
Izay mahatsikaiky dia ity samy tsy nametraka takela-pahatsiarovana, na ny Governemantan'ny Tanàna na ny Sekreteran'ny Kolontsaina. Mpizahatany maherin'ny iray no nijanona naka sary teo amin'io varavarana io izay manerana izao tontolo izao. Ankoatra izay, mety ho nanao fihodinana kely iray manantantara izy ireo, miala avy ao amin'ny tranon'i Mafalda, mankany amin'ny trano fivarotan'i Don Manolo, mandrapahatonga any amin'ny tranon'i Quino. Inona no sakana tsy hanaovana zavatra tsotra sy mahafinaritra tahaka izany ho an'ireo vahoaka vaventy sy madinika?
Fotoana fohy taorian'izay, Gallo sy Pablo Mancini , izay manoratra amin'ny gazety Noticias koa, dia namorona ny blaogy atao hoe La casa de Mafalda , izay nangataka tamin'ireo tomponandraikitry ny tanàna mba hametaka takela-pahatsiarovana iray eo amin'ilay tranobe eo an-dalamben'i Shily, izay manondro ny toerana nonenan'i Mafalda.
Mpanao lalàna iray ao an-tanàna, Norberto Laporta, izay an'ny Antoko Sosialista, no nanolotra tolo-dalàna izay nankatoavin'ny Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires nony farany tamin'ny taona 2006. Takelaka natao ho apetraka eo amin'ny 371 Chile St dia hilaza fotsiny fa “Nipetraka teto i Mafalda”. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba an'io ato amin'ny blaogin'i Pablo Mancini , izay ahitana ilay lalàna manontolo nahazo fankatoavana.
Ireo blaogy hafa izay mandrakotra io lohahevitra io:
El triunfo BLOGER; La Casa donde Mafalda se…  (La nuez)
Una ley que nació en un blog  (ALT1040)
Mafalda tendrá su placa  (La brújula verde)
Más Mafalda  (Carpe Diem)
… y Mafalda tendrá su placa  (Diario de Gestión)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/28/105661/
 namoaka lahatsoratra iray [ES]: http://blocdeperiodista.com/2005/10/la-casa-de-mafalda-en-pleno-san-telmo.html
 Pablo Mancini: http://www.pablomancini.com.ar/
 La casa de Mafalda: http://lacasademafalda.blogspot.com/
 blaogin'i Pablo Mancini: http://www.pablomancini.com.ar/?p=1488
 El triunfo BLOGER; La Casa donde Mafalda se…: http://lanuez.blogspot.com/2007/01/el-triunfo-bloger-la-casa-donde.html
 Una ley que nació en un blog: http://alt1040.com/archivo/2007/01/09/una-ley-que-nacio-en-un-blog/
 Mafalda tendrá su placa: http://www.labrujulaverde.com/2007/01/08/mafalda-tendra-su-placa/
 Más Mafalda: http://blogs.periodistadigital.com/carpediem.php/2007/01/07/mas_mafalda
 … y Mafalda tendrá su placa: http://www.diariodegestion.com.ar/index.php/apuntes/2007/01/06/y-mafalda-tendra-su-placa/